ऐतिहासिक जितका नायक - खेलकुद - साप्ताहिक
ऐतिहासिक जितका नायक
खेलकुदमा खुसीयाली मनाउने आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । दीपेन्द्रसिंह ऐरीको तरिका भने केही विशिष्ट छ । उनी विकेट लिएपछि समरसल्ट गर्छन् अर्थात् उफ्रेर पछाडिबाट शरीरलाई एक चक्र घुमाउँछन् । नेपालले एसीसी यू–१९ एसियाकपमा भारतलाई के हराएको थियो, उनलाई त्यसरी नै खुसीयाली मनाउनबाट कसैले रोक्न सकेनन् । जबकि केही समययता पिठ्युँमा देखिएको समस्याका कारण उनले त्यसरी खुसीयाली मनाउन पाइरहेका थिएनन्, यद्यपि मलेसियामा यति जोखिम उठाउनु स्वभाविक थियो ।
विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो— भारत । भारतको क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईजत्तिको धनी खेल संस्था यो विश्वमा अरू कुनै छैन । भारतमा जत्तिको बलियो घरेलु क्रिकेट ढाँचा अन्त कतै छैन । यो स्तरीयताको आधारमा पनि हो, यससँग जोडिएको धनको लेखाजोखामा पनि । त्यही भारतको युवा टिमलाई हराउनु भनेको नेपालका लागि ‘जीवनमा एकपटक आउने मौका’ जस्तै हो अर्थात खेल भाषामा यसलाई ‘वन्स इन ए लाइफ टाइम’ भनिन्छ ।
यस्तै अवसर नेपाली युवा टिमले आत्मसात् गरेको छ र त्यसलाई सबै अर्थमा ऐतिहासिक मान्नैपर्छ । अहिले मलेसियामा एसीसी यू–१९ एसियाकप चलिरहेको छ र समूह चरणमा नेपालको भेट भएको थियो, भारतसँग । भारतीय टिमका प्रशिक्षक हुन्, एक जमानाका नाम चलेका क्रिकेटर राहुल द्रविड । सक्रिय खेल जीवनमा उनलाई ‘वाल’ भनिन्थ्यो अर्थात् पर्खाल । तिनै द्रविडले पनि प्रतियोगितामा नेपालले भारतलाई १९ रनले हराएपछि माने, ‘नेपाल जितका लागि वास्तवमै हकदार थियो ।’
नहोस् पनि किन ? नेपाली खेलकुदले प्राप्त गरेका ठूला–ठूला सफलतामा यसलाई पनि गणना गरिनेछ र त्यसको नायक रहे— दीपेन्द्र । यस अर्थमा नेपाली क्रिकेटले स्टार खेलाडी पाएको छ, अझ भनौं समग्र नेपाली खेलकुदले नै । दीपेन्द्र नेपाली यू–१९ टिमका कप्तान पनि हुन् । सम्भवत: उनलाई अहिले आएर स्टार मात्र मान्नु अन्याय पनि हुनेछ, किनभने उनले यसअघि नै आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गरिसकेका छन् । त्यस अर्थमा उनी सुपरस्टार नै हुन् कि ?
खासमा उनी अलराउन्डर हुन्, बल र ब्याट दुवैमा चम्कन सक्ने । भारतविरुद्ध पनि उनले सुरुमा ब्याटबाट ८८ रन बनाए भने पछि भारतीय ब्याटिङक्रमलाई ध्यस्त पार्दै चार विकेट लिए । उनले बलिङ आक्रमणको जिम्मा लिनुअघि भारत ठोस सुरुवातसँगै जिततर्फ अग्रसर थियो, तर दीपेन्द्र बलिङमा आक्रमण रूपमा के प्रस्तुत भए, भारतीय ब्याट्सम्यानहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए, तासको घरजस्तै । दीपेन्द्र पक्का ‘जेन्टलम्यान’ खेलाडी पनि हुन्, त्यसैले यो जितको श्रेय आफू लिन चाहेनन्, सबै श्रेय पूरा टिमलाई दिए ।
प्रशिक्षक विनोद दासले दीपेन्द्रको प्रशंसामा शब्द खर्चिन कन्ज्युस्याइँ गरेनन् । विनोदको भनाइ थियो, ‘नेपालले भविष्यका लागि खेलाडी पाएको छ । उनी सबैभन्दा बढी भरपर्दा खेलाडी हुन् ।’ दीपेन्द्र नेपाली राष्ट्रिय टिमका सदस्यसमेत हुन् । केन्याविरुद्ध विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा उनले ब्याटिङको राम्रै नमुना पेस गरे । यी मिडल–अडरका ब्याट्सम्यान क्रिजमा प्राय: चौथो क्रममा आउँछन् ।
केन्याविरुद्धको दोस्रो खेलमा उनले उत्कृष्ट ६६ रन बनाएका थिए । त्यतिबेला दीपेन्द्रले चोटग्रस्त कप्तान पारस खड्काको स्थानमा मौका पाएका थिए र त्यसको पर्याप्त फाइदा पनि उठाए । केही हदसम्म उनी अहिले आफैं चोटग्रस्त छन् । उनको खास बलिङ शैली, मिडियम पेसर हो, तर उनी अहिले स्पिनरका रूपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । पिठ्युँको समस्याका कारण उनी अहिले बनेका छन्, ‘राइट आर्म अफ ब्रेक’ बलर । दीपेन्द्र नेपाली क्रिकेटमा देखा परेको तीन वर्ष भयो । त्यति बेला भएको एसीसी यू–१९ प्रिमियरमा उनले श्रीलंकाविरुद्ध ९० रन बनाएका थिए ।
घरेलु क्रिकेटमा त उनी स्थापित नाम नै हुन् । धनगढी प्रिमियर लिगमा विराटनगर किंग्सले उनलाई सर्वाधिक ८० हजार रुपैयाँ भाउ लगाएको थियो । उनको टिम उक्त प्रतियोगिताको फाइनलसम्म पनि पुग्यो । अब हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा उनी चिवतन टाइगर्सका खेलाडी हुन्, त्यो पनि ‘मार्क प्लेयर’, अर्थात् टिमका प्रमुख स्टार जसको प्रभाव अत्याधिक छ । मार्की प्लयेरले कम्तीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । यसैले देखाउँछ, उनी कस्ता खेलाडी हुन् ?
पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा सुदूरपश्चिमको प्रभाव बढ्दो छ । दीपेन्द्र यसै क्रमका खेलाडी हुन् । उनी कञ्चनपुरका हुन् । उनको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दा उनीजत्तिको लजालु खेलाडी नेपाली क्रिकेटमा विरलै फेला पर्छन् । मिडियासँग बोल्न त उनी सकेसम्म पछाडि हट्छन् । बोल्नै परे, निकै कम बोल्छन्, मानौं बोल्दा नगद खर्च हुन्छ, तर मैदानमा उनको खेल, त्यसको ठीक विपरीत निकै आक्रामक हुन्छ । खासमा दीपेन्द्र नेपाली क्रिकेटलाई साँच्चै अघि बढाउन सक्ने खेलाडी हुन् ।
दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई मन पर्छ
खेलाडी : महेन्द्रसिंह धोनी
टिम : दक्षिण अफ्रिका
खेल : टेबलटेनिस
गायक : सोनु निगम
गायिका : यही भन्ने छैन
नायक : रणवीर कपुर
नायिका/मोडल : नीति शाह
खाना : नेपाली
चलचित्र : रोमान्टिक
साधन : बाइक
ग्याजेट : स्मार्टफोन
पहिरन : क्याजुयल
रंग : गुलाफी
मौसम : जाडो
चाड : तिहार
प्रकाशित :मंसिर १, २०७४
लभ स्टेसनको सुभसाईत
रोबोट डगको सामूहिक अन्त्येष्टी
एन्फामा ऐतिहासिक परिवर्तन
बेरोजगार भविष्य र हाम्रा सन्तति
तिलोत्तमा प्रिमियरका आठ टिममा १ सय १२ खेलाडी आश्विन २१, २०७५
सुक्दै बंगलादेशी फुटबल आश्विन १५, २०७५
बंगबन्धु गोल्डकप नेपालसामु उपाधि रक्षाको चुनौती आश्विन १४, २०७५
मैदानबाहिर हारेको युद्ध आश्विन ८, २०७५
विश्व टेनिसका आदर्श जोडीहरू आश्विन १, २०७५
मिलन भए मिस्टर बुल्समेन भाद्र २५, २०७५
एसियाली खेलकुद : हामी कहाँनिर चुक्यौं ? भाद्र २४, २०७५
एसियाडमा नेपालको सुधारिएको प्रदर्शन भाद्र १८, २०७५
प्याराग्लाइडिङले धान्यो नेपालको इज्जत भाद्र १७, २०७५